चीनको शंकास्पद ल्याबसँग अमेरिकी कनेक्सन भेटियो, के कोरोना फैलाउन अमेरिकाको हात छ ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /बिज्ञान प्रबिधि/चीनको शंकास्पद ल्याबसँग अमेरिकी कनेक्सन भेटियो, के कोरोना फैलाउन अमेरिकाको हात छ ?
सोमबार काठमाडौं। कोरोनाभाइरस सबैभन्दा पहिले चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको मानिएको छ । यो भाइरस जंगली जनावरबाट मानिसमा फैलिएको बताइएको छ । यस्ता भाइरस चमेरामा पाइने भएकोले सम्भवतः यो भाइरस पनि चमेरोबाटै फैलिएको अनुमान गरिएको छ । यही बीचमा चीनको एक प्रयोगशालामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । यो प्रयोगशाला चीनको जंगली जनावरको बजार नजिकै भएका कारण यो ल्याबमाथि प्रश्न उठेको थियो ।यो ल्याब निकै सुविधासम्पन्न र उन्नत छ ।